true tone-scale /zu-ZA/tools-for-life/tone-scale/steps/the-emotional-tone-scale.html read 2 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/tone-scale_zu_ZA.jpg I-Emotional Tone Scale
I-Tone Scale efanekiswe kuleli khasi ikukhombisa amanye wamazinga e-tone abaluleke kakhulu ozowathola kubantu. Isuka ku-emotional tone yokuthula (isimo esizolile, esinokuthula futhi esingasibiza iNjabulo) kusuka phezulu kakhulu ukuya phansi uMdlandla, iSizungu, iNgxabano, Intukuthelo, uKwesaba, uSizi kanye noKunganaki. Ngezansi kwalokho umuntu angaba ne-emotional tone yoMzimba woKufa (wenza sengathi ufile ngempela noma empeleni uqulekile).
Ungasebenzisa i-Tone Scale ukubona izinga le-emotional tone yabantu ophila futhi usebenza nabo, kanye nanoma ngubani oxhumana naye nganoma isiphi isikhathi.
Ukhona ukubona nokwazi ukuthi yiliphi izinga le-tone umuntu akulo—kungaba kulelo zinga le-tone isikhathi esifushane noma njalo ekulelo zinga le-tone—kungakusiza ukuqagela ukuthi lowo muntu uzoziphatha kanjani lapho ukhuluma naye noma uxhumana naye.
Sebenzisa lesi sikali ukuze ufunde ukuthi ungawabona kanjani ngokushesha nangokuqondile amazinga ama-tone wabantu abaseduze kwakho.
I-TONE SCALE NOKUQONDA
Ama-tone we-Emotional Tone Scale acacile kakhulu. Wonke umuntu oseMhlabeni ukwenye indawo ku-Emotional Tone Scale futhi uyenyukela phezulu ehlele naphansi kusikali elandela iphethini yaso eqondile. Abantu bahlala benyukela phezulu noma behlele phansi ngalama tone, elinye emva kwelinye.
Ama-Emotional tone abizwa nangokuthi ama-tone okusondelana. Ukusondelana kusho uthando noma ukuthanda, futhi kusetshenziswa lapha njengomqondo wokuthi umthanda noma awumthandi kangakanani umuntu noma okuthile. Ungakubona lokhu kalula uma uthatha umuntu osezingeni eliphezulu lesikali. Umuntu othile othokozile unothando noma ukuthanda okukhulu kwabanye abantu. Kepha umuntu onentukuthelo akanalo uthando olukhulu noma ukuthanda noma ubani.
Ukusuka phezulu kuya phansi kwe-Tone Scale, umuntu uhamba ngamazinga alandelayo:
Kunezindawo eziningi zokuma ezincane phakathi kwalama-tone, kodwa noma ngubani owaziyo noma yini ngabantu kufanele nakanjani ayazi lemizwa.
Lapho umuntu onganaki ethuthukisa i-tone lakhe, uzwa usizi.
Lapho umuntu onosizi ethuthukisa i-tone yakhe, uzizwa esaba.
Lapho umuntu onokwesaba ethuthukisa i-tone lakhe, uzizwa enentukuthelo.
Lapho umuntu onentukuthelo ethuthukisa i-tone lakhe, uzwa ingxabano.
Lapho umuntu onengxabano ethuthukisa i-tone lakhe, uzizwa enesizungu.
Lapho umuntu onesizungu ethuthukisa i-tone lakhe, uzizwa enomdlandla.
Lapho umuntu onomdlandla ethuthukisa i-tone lakhe, uzizwa enokuthula—noma injabulo.
Abantu bangaba kunoma yiliphi i-tone ngokuqhubekayo isikhathi eside kakhulu—usizi, ukwesaba, intukuthelo, ingxabano, isizungu ngisho nomdlandla.
Njengoba sine-Tone Scale emboza isihloko sokusondelana, futhi sinesinye sokuxhumana. Ezingeni lemizwa ngaminye, sinesimo sokuxhumana.
Ngokwemvelo, lapho umuntu “enamathela” kunoma yiliphi ibhande le-Tone Scale—ukunganaki, usizi, ukwesaba, intukuthelo, ingxabano, isizungu, umdlandla noma injabulo—uzwakalisa ukukhuluma ngaleyo emotional tone.
Umuntu ohlezi enentukuthelo ngento ethile ubhajwe entukuthelweni. Umuntu onjalo akamubi kangako njengomuntu ongaphansi kokunganaki, kepha kuseyingozi ukuba naye eduzane ngoba uzokwenza inkathazo. Futhi umuntu othukuthele akazilawuli izinto kahle. Ukuxhumana kwabantu kula mazinga ahlukene ku-Tone Scale kuyahehana impela. Basho izinto futhi baphathe ezokuxhumana ngendlela ethile futhi ebonakalayo kulelo nalelo zinga le-Tone Scale.
Njengokuba ukusondelana nokuxhumana, kunezinga iqiniso yelinye nelinye lamazinga e-tone. Iqiniso lithinta izinto eziqinile. Ngamanye amagama, ukuqina kwezinto kanye ne-emotional tone yabantu kunokuxhumana okucacile.
Abantu abaphansi ku-Tone Scale abakwazi ukubekezelela noma yini eqinile. Abakwazi ukubekezelela into eqinile. Lento akusilo iqiniso kubo. Inciphile noma yehlile ngesisindo. Njengoba bekhuphuka ku-Tone Scale, into efanayo iya ngokuya iqina futhi bagcina sebebona ukuthi iqine kangakanani ngempela. Izinto ziqhakazile kubo noma, zibuthuthu kakhulu, kuya ngokuthi bakuphi ku-Tone Scale.
Uma wawubheka ngamehlo omuntu onentukuthelo, wawungabona umhlaba owabe uqine ngokuyi “yingozi”, lapho konke okuqinile kubukeka “njengosongo elinobudlova” kuye.
Umuntu osezingeni lentokozo ku-Tone Scale angabona izinto eziqinile njengoba zinjalo, zikhanya njengoba zinjalo futhi uyathanda ukuba nezinto eziqinile ngakuye. Ngamanye amagama, njengoba umuntu ekhuphuka ku-Tone Scale ukusuka ezingeni eliphansi kuya kweliphezulu, izinto zingaya ngokuya ziqina futhi ziye ngokuya ziba iqiniso.
Ukusondelana kuhambelana eduze kakhulu nesikhala. Eqinisweni, ukusondelana kungachazwa njengomqondo webanga, ngoba abantu abaqhelelane kakhulu noma abasondelene kakhulu banamazinga ahlukene okusondelana. Uma unokusondelana kakhulu nomuntu othile, uthanda isikhala sakho nalowo muntu. Umuntu othile ojabulile uthanda ukwabelana nabantu isikhala sakhe. Kepha lapho umuntu ehla nge-Tone Scale, inani lokusondelana liyehla futhi angeke abe nabanye abantu ababelana nesikhala sakhe. Thatha, isibonelo, umuntu osezingeni le-tone yentukuthelo. Akafuni muntu esikhaleni sakhe.
Iqiniso, njengoba sesibonile, linokwenza neziqinile.
Ukuxhumana kuqukethe ukugeleza kwemibono noma izinhlayiya phakathi kwesikhala phakathi okuqinile noma phakathi kwabantu ababili noma abaningi.
Ukusondelana, Iqiniso kanye Nokuxhumana konke kufaka UKUQONDA. Ukuze ube nokuqonda nanoma yimuphi umuntu, kufanele ube nazo zontathu izingxenye zakhona—Ukusondelana, Iqiniso kanye noKuxhumana. Ake sibheke ukuthi kusebenza kanjani lokhu lapho usebenza nabanye abantu futhi usebenzisa i-Tone Scale.
Abantu abangenza izinto baphezulu kakhulu ngokusondelana, baphezulu kakhulu ngokuya ngokweqiniso futhi banekhono kakhulu ngokuya ngokokuxhumana. Baqondakala kalula.
Ngakho-ke unga khuluma kanjani nomuntu?
Ikhono lakho lokukhuluma nothile lihlobene nokusabela kwakho ngokwe-emotional kuye. Wonke umuntu une-emotional engafani yokusabela kubantu abahlukene abaseduze naye.
Ukuxhumana ngempumelelo nomuntu, kufanele uqale ube nokusondelana okuthile naye. Uma ungamnaki omunye umuntu ngempela, uzoba nobunzima obukhulu ukukhuluma naye—lokho kunjalo. Indlela yokukhuluma nomuntu othile, ke, kungaba ukuthola okuthile ozokuthanda ngaye futhi nixoxe ngokuthile angavumelana nawe ngakho. Lokhu ukuwa kokuxhumana okuningi—umuntu akaxoxi ngezihloko omunye umuntu anazo noma yiyiphi inhla yokuvumelwana.
Lokho esivumelana ngakho kuvame ukuba iqiniso kakhulu kunalokho esingavumelani ngakho. Kukhona ubudlelwano obucacile phakathi kokuvumelana neqiniso. Lezo zinto eziyiqiniso esivumayo ukuthi ziyiqiniso. Lezo zinto ezingesilo iqiniso esivumayo ukuthi azisilo iqiniso. Isibonelo, abantu ababili kungenzeka ukuthi bahlekisa ngezingubo zomuntu wesithathu ekhona egumbini elilodwa futhi ezwa ukuthi bathini. Uma lomuntu eyizwa lengxoxo engavumelani nengxoxo emayelana nezingubo zakhe, uzokwehla ku-emotional tone futhi empeleni ehle ekubeni yiqiniso kulabo bantu abaxoxa ngaye.
Ukuthola iqiniso, kumele uthole okuthile enivumelana ngakho nobabili. Ngemuva kwalokho uzame ukugcina izinga eliphakeme ngokwanele lokusondelana ngokuthola okuthile okuthandayo ngomunye umuntu. Ngemuva kwalokho uzokube sewukhona ukukhuluma naye. Uma ungenawo amaphuzu amabili okuqala (into ethile enivumelana kuyo nokuthile okuthandayo ngaye), kusobala ukuthi iphuzu lesithathu—ukuxhumana—ngeke libe khona (okusho ukuthi, ngeke ukwazi khuluma naye kalula).
Isibonelo, uma ubuya kunhlolokhono lomsebenzi bese usaqala nje ukutshela umuntu okuhlolayo ngeholide lakho lokugcina, kungenzeka kube nesivumelwano esincane. Kepha ake sithi uthole ukuthi wayenesikebhe esikhulu futhi sabe singumdlalo wakhe wokuzilibazisa, ungaqala ukuxhumana ngokuthi umtshele ukuthi ubukade ugibele isikebhe kamuva nje futhi usithandile ngempela. Kuzoba nokuvumelana masinyane phakathi kwenu nobabili.
Uma umuntu exhumana futhi axhumane nabantu kahle—elalela abakushoyo futhi abenze bazi ukuthi ubazwile bese esho lokho azokusho kubo, ngobumnene ngempela futhi kaningi impela, ukuze empeleni kwamukelwe yibo—uzophinda athole ikhono lokusebenza nabo futhi axhumanise izenzo zabantu abasondelene naye.
Lokhu kuzwakala njengomlingo. Futhi kunjalo. Kwi-Scientology.